Teknụzụ na-eme ka akụ na ụba akụ na Indiana | Martech Zone
Teknụzụ na-eme ka akụ na ụba akụ na ụba dị na Indiana
Tọzdee, Machị 24, 2011 Fraịde, Ọgọstụ 24, 2012 Bọọlụ Lorraine
Dịka onye ọka ikpe maka onyinye onyinye Mira Mira nke 2011, enwere m ohere isoro nzukọ, ndị na-echepụta ihe, ndị mmemme na ndị isi azụmaahịa na-enwe nzukọ ụbọchị na-enwe mmetụta dị ukwuu na teknụzụ anyị. Agbanyeghị na enweghị m ike ịgwa gị ndị mmeri bụ, ị ga-aga Mira Awards n'ọnwa na-abịa, enwere m ike ịgwa gị na enwere ụfọdụ ihe na-atọ ụtọ na-eme ebe a.
Dị ka ị ga-atụ anya ya, ọtụtụ n'ime ihe ngosi ndị ahụ gbasara nkà na ụzụ. Agbanyeghị, ụfọdụ n'ime ihe kacha amasị m bụ ebe ụlọ ọrụ ndị nọrọ ogologo oge na-ekwu maka mmetuta obodo ha nwere banyere ihe ọhụrụ ha. Otu nke m chere nwere ike imetụta obodo azụmaahịa Central Indiana bụ ngwa nke MIBOR mepụtara. Ee, ị na-agụ ikike ahụ, NKWUKWU (ndị Metropolitan Indianapolis Board nke Realtors).
Yabụ kedu ihe MIBOR mere nke mere ha jiri nọrọ oche na tebụl teknụzụ? Ọ bụ ngwa ọhụrụ ha TheStatsHouse.org. Mepụtara na mmekorita ya na Indiana Business Research Center, MIBOR achikota kenkwukorita nchekwa data nke-adọ data na Central Indiana ulo egosi. Nke a bụ ngwa dị ike maka otu mmepe mmepe mpaghara na-anwa ịdọrọ uche nke ndị otu nhọrọ saịtị wee kwenye ụlọ ọrụ na ịkwaga Indianapolis nwere ezi uche.
Na-eweta ọnụọgụ, ụlọ, na data akụ na ụba n'aka ndị mmadụ n'otu n'otu na-atụle ịkwaga Indianapolis ma ọ bụ ndị na-ewe ndị ọrụ na-anwa ịrata ndị ọrụ kachasị mma na obodo anyị na ngwa a na-ewuli akụkọ na-akpali akpali. Ihe ndekọ ọkọlọtọ na nke akụkọ ọdịnala dị na PDF, Okwu na Excel, yabụ ndị ọrụ nwere ike iwulite eserese ha na eserese ha.
Na mgbakwunye na ụdị ọnụọgụ ọnụọgụgụ saịtị ahụ gụnyere nyocha nke ọnụ ahịa obibi, ụtụ isi ụlọ, na uru dollar na obodo gafee mba ahụ. Otu n’ime njirimara kachasị amasị m bụ profaịlụ ebe ahụ. Na iji kọmputa ede otu adreesị, inwere ike ịbanye n'ime ihe omume igwe mmadụ nke otu obodo dị na redio dị kilomita 2, 5, 10 ma ọ bụ 20. Nkọwapụta ọrụ ga - agwa gị ọtụtụ azụmaahịa, na ụdị azụmaahịa dị na gburugburu obodo.
Ezie na m hụrụ n'anya ngwa mmepe ngwa ọrụ, enwere ụfọdụ ngwa ahịa na-atọ ụtọ m nwere ike iche maka.
Ndị MIira nke afọ a na-akwagide teknụzụ na mgbasa ozi n'ọtụtụ ụzọ dị iche iche. Enwere m olile anya na ị ga - ahụ maka ikele ndị mmeri na Mee, wee hụ ụzọ aka obodo anyị si atọ anyị ụtọ.
Tags: ọganihu akụ na ụbaaku na ubaIndiana
Lorraine Ball afọ iri abụọ na ụlọ ọrụ America, tupu ya abịa n'uche ya. Taa, ị nwere ike ịchọta ya na Gburugburu, obere ụlọ ọrụ ahịa, nke dị na Kamel, Indiana.
Social Media Marketing na-adaghị
Mepee Ubi Zoro ezo na Wufoo